Singapore Education Services in Myanmar | CareForever Services ပညာရေး ပင်မစာမျက်နှာ
ဒီပလိုမာများDIPLOMA IN CONSTRUCTION INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING
DIPLOMA IN CONSTRUCTION ENGINEERING DIPLOMA IN DESIGN ( Interior & Landscape )
BCA Academy ( Building and Construction Authority ) သည် စင်္ကာပူ အမျုိးသား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန (Ministry of National Development) လက်အောက်တွင် ရှိသော အစိုးရကျောင်း ဖြစ်ပါသည် ။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင် Engineer တစ်ယောက်အဖြစ် ဂုဏ်ယူတင့်တယ်စွာ ရပ်တည်လိုသူများ အတွက် BCA Academy သည် စိတ်အချရဆုံး နှင့် အခိုင်မာဆုံးသော ကျောင်းဖြစ်ပါသည် ။
ဘာသာရပ် (၆)ခု မှ မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ် တစ်ခု အား စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် တက်ရောက် နိုင်ပါသည် ။ BCA Academy တွင် တစ်နှစ်လျှင် April Intake နှင့် October Intake နှစ်ခု ရှိခြင်းကြောင့် မိမိတို့ အဆင်ပြေသည့် Intake တွင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည် ။ Diploma သင်တန်းကာလမှာ (၃) နှစ်ကြာမည် ဖြစ်ပြီး (၂) နှစ်ခွဲ ပြီးဆုံး ချိန်တွင် Industrial Job Attachment ရှိခြင်းကြောင့် ကျောင်းမပြီးခင် Working Experience အပြည့်အဝ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
Scholarships & Achievement Awards BCA မှကျောင်းသားကျောင်းသူများ Scholarship ရလျှင် ကျောင်းလခလုံးဝပေးစရာ မလိုသည့်အပြင် စင်္ကာပူအစိုးရ မှ တစ်လလျှင် S$ 900 ကိုချီးမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် Scholarship Sponsor အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ READ MORE Contact Us Yangon Address : No.(177/179), 7B, 7th Floor, 34th Street (upper block ) , Kyauktada Township, Yangon. Tel :09-73113092 ,09-5166240 ,
ENQUIRY BCA ENQUIRY SingHealth ENQUIRY စင်္ကာပူနိုင်ငံ အစိုးရကျောင်း
BCA Academy ၏ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး
ခုနှစ်မှစ၍ စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ Engineering အစိုးရကျောင်းဖြစ်သော BCA Academy သည် International Students များအတွက်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသား/သူများအတွက် Scholarship ရရှိသည့်အပြင်
တစ်နှစ်လုံးအတွက် (S$ 10800) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သော ကျောင်းသား/သူများအတွက် BCA Academy ကျောင်းသို့ တက်မည်ဆိုပါက နှစ်စဉ်ကျောင်းလခအနေဖြင့် S$ 9095 ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။ BCA Academy ကျောင်းသို့ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုလိုပါက လိုအပ်ချက်များအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများ၊ GCE’O’Level အောင်မြင်ထားသူများ၊အမှတ်စာရင်း အနည်းအများနှင့် IELTS/TOEFL certificate အမှတ်များလည်း မလိုအပ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးပါက Diploma သင်တန်းကိုစတင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Diploma သင်တန်း(၃)နှစ်တက်ရောက်ပြီးပါက Bachelor ဆက်တက်ချင်သူများအနေဖြင့် (NTU,NUS,etc..) စသည့်
University ကျောင်းများသို့တိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ BCA Academy ကျောင်းတွင်
Diploma ပြီးမြောက်ပါက မြန်မာကျောင်းသား/သူများ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်သည့်အခါ မ်ိမိကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု၊အရည်အသွေး၊အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် Care Forever
Services Co.,Ltd မှ ကျောင်းသားအမြောက်အများ မွေးထုတ်ပေးနေပါသည်။BCA Academy ကျောင်း၏ အားသာချက်များမှာ အင်ဂျင်နီယာကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးလျှက်ရှိပြီး အခြားကျောင်းများနှင့်ယှဉ်လျှင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ BCA Academy၏ အားသာချက်ကတော့ ကျောင်းသား/သူများအတွက် လက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားရှိမှုအပိုင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား/သူများအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ BCA Academy ကျောင်းသည် ကျောင်းသား/သူများ ၏ လိုအပ်ချက်များအနေဖြင့်သင်ကြားမှုပိုင်းဆိုင်ရာကို အမြဲဂရုပြုပြီး၊သင်ယူမှုပိုင်းကိုလည်းအမြဲဆန်းစစ် နေသောကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ BCA Academy ကျောင်း၏ activities များအား အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Care Forever Services Co.,Ltd. Phone
:09-73113092,09-8625443,09-5166240,01-569818 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
BCA Diploma	Diploma in construction Information Technology Diploma in Construciton Engineering
Diploma in Mechanical Engineering ( Green Building Technology ) Diploma in Strategic Facilities Management